အစဉ်အလာအိုင်းရစ်ဆိုဒါပေါင်မုန့် (ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၄) - Sugar Geek Show - ပေါင်မုန့်
Pies နှင့် Tarts
ရိုးရာအိုင်းရစ် Soda ပေါင်မုန့်
ဒီနေ့စိန့်ပက်ထရစ်နေ့အတွက်ရိုးရာအိုင်းရစ်ဆိုဒါမုန့်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်။ အိုင်းရစ်ဆိုဒါပေါင်မုန့်သည်နူးညံ့။ နူးညံ့ပြီးအပြင်ဘက်တွင်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလောက်သောအခွံမာရှိသည်။
Authentic Irish soda ပေါင်မုန့်အတွက် pastry (သို့) ကိတ်မုန့်ကိုသုံးရမလား။
ငါ All- ရည်ရွယ်ချက်မုန့်ညက်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အိုင်ယာလန်ဆိုဒါမုန့်အတွက်ချက်ပြုတ်နည်းတွေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ မင်းဒီမုန့်ညက်ကိုသုံးရင်မင်းရဲ့ပေါင်မုန့်ကအရမ်းခက်လိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ပေါင်မုန့်ဟာချိုသာလွန်းပြီးသိပ်သည်းမှုမရှိစေဖို့ဒီအနိမ့်ပရိုတိန်း၊ ကိတ်မုန့်ဒါမှမဟုတ်ကိတ်မုန့်စတဲ့နူးညံ့သောမုန့်ညက်ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အိုင်ယာလန်ဆိုဒါမုန့်၏သမိုင်းနှင့်ဘာကြောင့်ကိတ်မုန့်နှင့် pastry မုန့်ညက်အားလုံး (သို့) လွင်ပြင်မုန့်များအစားအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသည်ကိုအောက်တွင်ဖတ်ပါ။
soda မုန့် တဆေးမဟုတ်ဘဲမုန့်ဖုတ်ဆိုဒါဖြင့်ပြုလုပ်သောအမြန်မုန့်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကအိုင်ယာလန်တွင်လူကြိုက်များခဲ့သည် အိုငျးရစျအာလူးအစာခေါင်းပါးသောအခါ တစ်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ပေမယ့်အာဟာရအစားအစာအဖြစ် 1845-1849 ၏။
ရိုးရာအိုင်းရစ်ဆိုဒါမုန့်ဟင်းလျာတွင်လေးမျိုး၊ Flour, Salt, Baking Soda, Buttermilk တို့ကိုသာအသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရိုးရာနှင့်စစ်မှန်သောချက်ပြုတ်နည်းများအတွက်နို့စို့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါထောပတ်နှင့်ကြက်ဥထည့်ထားသောခေတ်သစ်ပြောင်းလဲမှုများကိုပိုနှစ်သက်သည်။ အချို့သောမူကွဲများတွင်စပျစ်သီးပျဉ်သို့မဟုတ်ရေစီးကြောင်းများပါ ၀ င်သည်။
Authentic Irish ဆိုဒါမုန့်အတွက်ထောပတ်စားရန်လိုအပ်ပါသလား။
နို့ချဉ်သည်အမှန်တကယ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်အရာမဟုတ်ဘဲနို့ထွက်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။ နို့ချဉ်သည်အချဉ်ပေါက်သည့်နို့ဖြစ်သည်။ သောက်ဘို့သိပ်မကောင်းဘူး ဒါကြောင့်နို့နဲ့နို့ကိုရောင်းဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားရတယ်။
နို့ချဉ်ကို ၀ ယ်တာကလတ်ဆတ်တဲ့နို့ကို ၀ ယ်တာထက်ဈေးချိုတယ်၊ ဒါကြောင့်မုန့်ဖုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ သို့သော်စာရွက်တစ်ရွက်တွင်နို့ရည်ကိုအလုပ်ပြီးအောင်လုပ်ရန်အတွက်မုန့်ထုပ်ကိုတုံ့ပြန်ရန် (ပူဖောင်းများ) ဟုခေါ်သည့်မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါသည်လိုအပ်သည်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာနို့ရည်နဲ့ဆင်တူတဲ့နို့ရည်ရှိတယ်။ သငျသညျ buttermilk မရှိပါက, သင်ပုံမှန်နို့နှင့်နှိုးဆော်နှစ်ခုခွက်ထဲသို့အဖြူရှလကာရည်သို့မဟုတ်သံပုရာဖျော်ရည်နှစ်ခုဇွန်းထည့်နိုင်သည်။
သင်တို့သည်လည်းနို့ရည် tartar ၏မုန့် 1 1/2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အလားတူရလဒ်များကိုရနိုင်သည်။
သင်လည်းဝယ်နိုင်သည် အမှုန့်ထောပတ် ရေထဲကိုထည့်လိုက်ရင်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာပျက်စီးသွားမှာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲသင်လိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းနို့ရည်ရရှိနိုင်တယ်။
အိုင်းရစ်ဆိုဒါပေါင်မုန့်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ရိုးရှင်းစွာမုန့်ညက်မုန့်ညက်, မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်ဆားအတူတကွဆန်ခါ, ပြီးတော့အလယ်ဗဟိုတစ်တွင်းရေတွင်းအောင်။ သင်၏မိခင်နို့တစ်ဝက်ကိုထည့်ပြီးအပြင်ဘက်မှခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုဗဟိုဆီသို့ ဦး တည်ပါ။ ထို့နောက်ကျန်သောနို့ကိုထည့်ပြီးအရာရာတိုင်းကိုစိုစွတ်သည်အထိခေါက်ပါ။
မုန့်ဖုတ်ခြင်းမပြုမီအိုင်ယာလန်ဆိုဒါမုန့်ထိပ်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်ခုတ်လေ့ရှိသည်။ ဤသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းမုန့်ကိုခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲစနစ်တကျပြန့်နှံ့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤအပိုင်းလေးပိုင်းကိုလည်း“ လူသိများသည်။ ကျောက်တံတား “ အစာစားသောအခါပေါင်မုန့်ထိပ်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်ဖြင့်သုံးပြီးပေါင်မုန့်ကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲပါ။
ဆိုဒါပေါင်မုန့်ကိုအိုင်ယာလန်တွင်တီထွင်ခြင်းမရှိသော်လည်းအိုင်ယာလန်လူမျိုးများက၎င်းကိုယနေ့လိုအပ်သောအရာဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါသည်မြင့်တက်လာသည့်အေးဂျင့်အဖြစ်ရရှိလာသောအခါအိုင်ယာလန်က၎င်းမှဈေးပေါသောပေါင်မုန့်ပြုလုပ်ရန်စတင်အသုံးပြုခဲ့သည် နူးညံ့သောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဂျုံမှုန့် လေ့အိုင်ယာလန်ရဲ့ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်၌စိုက်ပျိုးသော (ကိတ်မုန့်သို့မဟုတ် pastry မုန့်ညက်) ။
ထုံးတမ်းစဉ်လာအရတဆေးကိုပေါင်မုန့်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသော်လည်းစျေးကြီးပြီးဝင်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်ဂျုံမှုန့် (All-ရည်ရွယ်ချက်မုန့်ညက်) လိုအပ်သည်။
၂၀ ရာစုနောက်ပိုင်းတွင်ကျန်ကမ္ဘာ့ဒေသများသည်တဆေးပါသောပေါင်မုန့်ဆီသို့ ဦး တည်ရွေ့လျားနေစဉ်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသည်သူတို့၏ဆိုဒါပေါင်မုန့်ကိုမှီဝဲကြပြီးအိုင်ယာလန်ဆိုဒါမုန့်ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။
အိုင်ယာလန်ဆိုဒါပေါင်မုန့်ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်သိပ်မအံ့သြခဲ့ဘူး။ ပေါင်မုန့်သည်နာမည်နောက်တွင်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့အိုင်ယာလန်ဆိုဒါပေါင်မုန့်ဟာscရာမရုန်းရင်းဆန်ခတ်နဲ့တူတယ်။ အတွင်းပိုင်းအပေါ်ပျော့ပျောင်းပေမယ့် crunchy crumbly အပေါ်ယံလွှာနှင့်အတူ။
သူတို့အားနူးညံ့သောသကြား cookies များကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
အစဉ်အလာအိုင်းရစ်ဆိုဒါပေါင်မုန့်၏အရသာသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဒီပေါင်မုန့်ထဲမှာသွားအရသာသိပ်မများတာ၊ အိုငျးရစျ Stew ။ စစ်မှန်သောအိုင်းရစ်ဆိုဒါမုန့်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ခိုင်မာသော်လည်းမာကျောမှုမရှိသည့်အပြင်အပြင်ပိုင်းအပေါ်ယံလွှာလည်းရှိသည်။
ချိုမြိန်သောအိုင်းရစ်ဆိုဒါမုန့်တွင်သကြား၊ ကြက်ဥ၊ ထောပတ်နှင့်စမုန်နက်မျိုးစေ့နှင့်စပျစ်သီးပျဉ်ကဲ့သို့သောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်နိုင်သည်။ ဤခေတ်သစ်အိုင်ယာလန်ဆိုဒါပေါင်မုန့်သည်ပေါင်မုန့်ထက်ချိုသောဘီစကွတ်သို့မဟုတ်မွှေးကြိုင်သောအရာနှင့်တူပြီးစားရန် ပို၍ ပျော့ပြောင်းသော်လည်းအချိုပွဲနှင့်ပိုတူသည်။
ဒီတော့အိုင်းရစ်ဆိုဒါပေါင်မုန့်ဟာiantရာမ scone နဲ့တူတယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုစားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းက scone ကိုစားနေသလိုပါပဲ။ ထောပတ်သို့မဟုတ်ယိုအနည်းငယ်ဖြင့်ပူနွေးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးအရသာဖြစ်သည်။
Bailey ရဲ့အိုငျးရစျ Cream ကိတ်မုန့်
ရိုးရာအိုင်းရစ်ဆိုဒါမုန့်လေးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့အစစ်မှန်ဆုံးအရသာရှိတဲ့အိုင်းရစ်ဆော်ဒါပေါင်မုန့်အတွက်ကိတ်မုန့်ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်။ ပြင်ဆင်ချိန် -၅ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -လေး မိနစ် ကယ်လိုရီ235kcal
▢၁၆ အောင်စ (454 ဆ) မုန့်ညက်မုန့်ညက် သို့မဟုတ်မုန့်ညက်မှုန့် (၉% ပရိုတိန်းသို့မဟုတ်အောက်)
▢1 1/2 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဆားငန်
▢၁၄ အောင်စ (397 ဆ) နို့ သို့မဟုတ် 14 အောင်စနို့ပေါင်း2ဇွန်းရှလကာရည်ဖြူ
ဘောလုံးကိုဖွဲ့စည်းရန်မုန့်စိမ်းကိုခဏအကြာခေါက်ပါ (၂-၃)၊ သို့သော်အလွန်အကျွံမသုံးပါနှင့်သို့မဟုတ်ပေါင်မုန့်သည်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
မုန့်ဖုတ်စဉ်အတွင်းချဲ့ထွင်ရန်အတွက်မုန့်စိမ်း၏ထိပ်တွင် 'လက်ဝါးကပ်တိုင်' ဖြတ်ရန်ထက်သောဓားဖြင့်အသုံးပြုပါ
သင့်ရဲ့ဒတ်ခ်ျမီးဖိုနှင့်အဖုံးထဲသို့မုန့်စိမ်းကိုတင်။ ၄၂၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာမိနစ် ၃၀ ဖုတ်ပါ၊ ထို့နောက် ၁၅ မိနစ်ဖုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ်သင်၏ပေါင်မုန့်၏အတွင်းအပူချိန် ၁၉၅ ºF-200ºFမရောက်မှီတိုင်အောင်ဖုတ်ရမည်။
သင်၏အိုင်ယာလန်ဆိုဒါမုန့်ကိုထောပတ်၊ ယိုနှင့်သို့မဟုတ်တစ်ဖက်ဖက်တွင်လှပသောစွပ်ပြုတ်တစ်ခွက်လောက်စားပါ။ ဒီပေါင်မုန့်ဟာ ၂ ရက်လောက်ကြာအောင်ထိန်းထားနိုင်ပေမယ့်တကယ်လို့သူလုပ်တဲ့နေ့မှာစားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။
နူးညံ့သောပေါင်မုန့်အတွက်ကိတ်မုန့်သို့မဟုတ်မုန့်ညက်သည်ဤစာရွက်တွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ဒေသအတွင်းပရိုတင်းပါဝင်မှု ၉% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောနူးညံ့သောဂျုံမှုန့် (သို့) ပရိုတင်းဓာတ်နည်းသောမုန့်ညက်ကိုရှာဖွေပါ။ သင်လုပ်နိုင်သည် အစားထိုးထောပတ် ပုံမှန်နို့အတွက်အဖြူရောင်ရှလကာရည် ၂ ဇွန်းထည့်သည် သင်တို့သည်လည်းရေနှင့်အမှုန့်ထောပတ်ကိုသုံးနိုင်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောရလဒ်များအတွက်ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးဘုံအမှားများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ မှစကေးကိုသုံးပါ သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအလေးချိန် (အရည်များအပါအ ၀ င်) မဟုတ်ပါကညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါ (ဇွန်း၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၊ အဖြစ်တော့စသည်) ။ မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုစာရွက်ကဒ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစားပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ခွက်များအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမိုတိကျပြီးသင်၏စာရွက်၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေသည်။ မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုများ (ဂရမ်) များကိုမက်ထရစ်ဟုခေါ်သည့်စာရွက်ကဒ်ရှိပါဝင်ပစ္စည်းများအောက်ရှိသေတ္တာငယ်လေးကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ Mise en Place လေ့ကျင့်ပါ။ သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုကြိုတင်တိုင်းတာ။ တစ်ခုခုမတော်တဆထွက်ခွာရန်အခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချရန်သင်မရောစပ်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ စာရွက်ခေါ်ဆိုမှုများကဲ့သို့တူညီသောကုန်ကြမ်းများကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ။ အကယ်၍ သင်အစားထိုးခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဆိုလျှင်စာရွက်သည်မတူနိုင်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ငါဖြစ်နိုင်လျှင်အစားထိုးစာရင်းပြုစုဖို့ကြိုးစားပါ။
Kohakutou Crystal Gummy သကြားလုံး
ပန်းပု Bust ကိတ်မုန့်သင်ခန်းစာ
tartar ၏မုန့်မပါဘဲ macaron စာရွက်
သံပုရာဘလူးဘယ်ရီ Buttermilk ကိတ်မုန့်
ဤစိုစွတ်။ ကတ္တီပါပြားသည်သံပုရာလတ်ဆတ်သောကိတ်မုန့်သည်သံပုရာရနံ့၊ လတ်ဆတ်သောဘလူးဘယ်ရီနှင့် tangy cream cheese ချိစ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်! နွေရာသီ BBQ အတွက်ကောင်းပါတယ်!
ကြက်ဥ Pasteurize ဖို့ဘယ်လို
အစားအစာမှဖြစ်ပွားသောရောဂါပိုးများအန္တရာယ်လျော့ပါးစေရန်အိမ်၌သင့်ကိုယ်ပိုင်ဥများကိုပန်ကာမှိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ကြက်ဥ Pasteurizing စူပါလွယ်ကူသည်နှင့်သာ3မိနစ်ကြာ! Pasteurized eggs ဥများကိုပုံမှန်ဥကဲ့သို့သုံးနိုင်သည်။
Swiss Meringue Buttercream (SMBC)
ဆွစ်ဇာလန် meringue buttercream သည်ပါးလွှာသော meringue နှင့်ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်ကိုပြုလုပ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် super light နှင့် creamy ဖြစ်သည်! ငါ့အကြိုက်ဆုံး buttercream
© မူပိုင် ©. မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။